I-Ustaoset kufutshane neHardangervidda - I-Airbnb
I-Ustaoset kufutshane neHardangervidda
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguTonje
Indlu yamaplanga encinci enezinto eziyimfuneko ukuze kube lula ukungena ngololiwe okanye ngemoto. Ilungele ukutyibilika ekhephini kwilizwe ebusika (imizuzu eyi-10 ukuya eGeilo xa usihla endulini). NgoJuni ukuya ngo-Oktobha le ndawo ilungele ukunyuka intaba, ukuloba, ukuhamba ngephenyane, ukuhamba ngebhayisekile kunye nokukhwela ihashe.
Indlu yamaplanga yesintu encinci netofotofo, enento yonke nefikeleleka lula ngololiwe okanye ngemoto. Iikhilomitha eziyi-1 ukusuka kwisikhululo setreyini. Kukho indawo yokupaka ephandle emnyango ukuba uza ngemoto. Indlu yamaplanga inombane namanzi ashushu/abandayo. Kukho amagumbi okulala amancinci ayi-3, ikhitshi elincinci, negumbi lokuhlala elinendawo yomlilo netafile yokutyela. I-sauna yangaphandle yomphandle ifakwe ngamaplanga. Ayikho i-TV, kodwa imidlalo yebhodi yesintu kunye nesidlali se-DVD. Ungafumana i-intanethi efumanekayo, kodwa akukho siqinisekiso.
Yiza nezinto zakho zebhedi neetawuli
Sebenzisa indlu yamaplanga njengoko injalo kunye nayo yonke into oyifumanayo apho. Ayikho i-TV nomatshini wokuhlamba izitya, nomatshini wokuhlamba izitya
Yiza namashiti neetawuli zakho
Coca uze ushiye indawo ikwimeko entle
Sihlala eBergen , ekwiiyure eziyi-3,5 ukusuka ngemoto, okanye iiyure eziyi-2:45 ngololiwe. Phantse asizukwazi ukufumaneka, kwaye kuza kufuneka uyifumane indlu yamaplanga uze uyivule ngokwakho. Le nto ibisoloko isebenza kakuhle. Sisoloko sifumaneka ngefowuni/nge-sms kwaye siyakuvuyela kakhulu ukukunceda :-)
Kulula ukufikelela lula
Kufuphi neGeilo (imizuzu eyi-10 ngemoto okanye ngetreyini) apho kukho iilifti ezininzi kwabo bathanda i-slalom
Ngasentla komgca womthi
Kukho ivenkile yokutya
e-Ustaoset Uloliwe ovela eBergen naseOslo.
Ibhasi nayo iyenzeka
Imizuzu eyi-10 ngetreyini okanye ngemoto ukuya
e-Geilo Kukho ivenkile yokutya
e-Ustaoset Ukuqhuba ukusuka eBergen kuthatha iiyure eziyi-3:30 ukuya kweziyi-4
Uloliwe ovela eBergen uthatha iiyure eziyi-2:45
Ivenkile yokutya e-Ustaoset (ikumgama weekhilomitha eziyi-1)
Le yindlu yamaplanga eqhelekileyo eyakhiwe kuyo.
4.78 out of 5 stars from 235 reviews
4.78 · Izimvo eziyi-235
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi235
neGeilo Ngasentla komgca womthi
Kukho ivenkile yokutya e-Ustaoset
Umbuki zindwendwe ngu- Tonje
My husband, Bjarte and I live in Bergen on the west coast of Norway. We have 3 sons, two of them already adults:-). We like to hike, ski, be out in our boat and travel.
Sihlala eBergen , iiyure eziyi-3:30 kude ngemoto, okanye iiyure eziyi-2: 45 ngololiwe. Phantse asizukwazi ukufumaneka, kwaye kuza kufuneka uyifumane indlu yamaplanga uze uyivule ngokwakho. Siza kunceda ngefowuni :-)